Hilton Honors 3.9.0 Android အတြက္ Aptoide APK အား ေဒါင္းလုပ္ ျပဳလုပ္ပါ
ဗားရွင္း 3.9.0 လြန္ခဲ့ေသာ 1 လက
Application မ်ား ခရီးသြားျခင္း & ေဒသဆိုင္ရာ Hilton Honors
Hilton Honors ၏ ေဖာ္ျပခ်က္
အဆိုပါ app ထဲမှာဟီလ်တန်ရဲ့ 5300 ကျော်ဟိုတယ်နှင့်အပန်းဖြေစခန်းမဆိုစာအုပ်ဆိုင်များနှင့်သင်တို့သည်ငါတို့၏နိမ့်ဆုံးစျေးနှုန်းကိုရလိမ့်မယ်။ အဘယ်သူမျှမက hidden အခကြေးငွေ။ ပိုပြီးကယ်ဖို့ပင်အထူးကမ်းလှမ်းချက်များရှိပါသည်။
ဘယ်နေရာမှာမဆိုမှအပလီကေးရှင်းနှင့်အတူ Check, သင်သင်ပြီးပြည့်စုံသောအမြင်ကိုကူညီရှာဖွေပေးဖို့လမ်းပေါ်ကမြေပုံနှင့်အတူသင့်ရဲ့ကိုယ်ပိုင်အခန်းကိုကောက်ရလိမ့်မယ်။
အမိန့်အစားအစာ, အချိုရည်, သို့မဟုတ်ထိုထက်ပိုခေါင်းအုံးနဲ့တူနှစျသိမျ့, သင်ရောက်လာတဲ့အခါမှာသူတို့ကသင့်ရဲ့အခန်းတစ်ခန်းထဲမှာစောင့်ဆိုင်းနေပါလိမ့်မယ်။ သငျသညျရှိနေတခါတစ်ခုခုလိုအပ်ပါသလား? ဖြောင့် app မှအစစ်အမှန်ဟိုတယ်ဝန်ထမ်းနှင့်အတူစာသား။
အဆိုပါဟီလ်တန်ဂုဏ်ထူး app ကိုတောင်မှသင့်ရဲ့အခန်းကိုသော့ကိုဖွစျစနေို - ဒစ်ဂျစ်တယ် Key ကိုကျွန်တော်တို့ရဲ့ဟိုတယ်နှင့်အပန်းဖြေစခန်း၏ထက်ပိုမို 3600 မှာအလုပ်လုပ်ပါတယ်။
သင့်ရဲ့ဟီလ်တန်ဂုဏ်ထူးအကောင့် app ထဲမှာစီမံခန့်ခွဲရန်။ သငျသညျရရှိခဲ့သည်င့်မည်မျှမှတ်ကိုကြည့်ပါ, သင့်ကိုနောက်အဆင့်အတန်းဆီသို့ဦးတည်သင့်ရဲ့တိုးတက်မှုမြင်လျက်သူတို့ကိုသုံးစွဲဖို့အကောင်းဆုံးနည်းလမ်းထွက်တွက်ဆ။ အဖွဲ့ဝင်များကိုတောင်လုံခြုံအောင်သူတို့၏အကောင့်ကိုစောင့်ရှောက်ရန်မှာ Android လက်ဗွေနှင့်အတူလက်မှတ်ထိုးနိုင်ပါတယ်။
မဟီလ်တန်ဂုဏ်ထူး member? အဲဒီမှာ join ရန်မလွယ်ကူသောနည်းလမ်းတစ်ခုင်, သင်၏အကြိုးခံစားခှငျ့ချက်ချင်းစတင်ပါ။
လူအပေါင်းတို့၏အကောင်းဆုံးကျွန်တော်တို့ရဲ့ရဲ့ features အများစုကိုကျွန်တော်တို့ရဲ့ကမ္ဘာ့အဆင့်မီအမှတ်တံဆိပ်အားလုံးဖြတ်ပြီးကျွန်တော်တို့ရဲ့ဟိုတယ်များအားလုံးအတှကျရရှိနိုင်ပါသည်: ဟီလ်တန်ဟိုတယ် & Resorts, Waldorf Astoria ™ဟိုတယ် & Resorts, Conrad®ဟိုတယ် & Resorts, Hilton, Curio အားဖြင့်မြတ်သော - တစ်ဦးကငွေကောက်ခံ ဟီလ်တန်™, DoubleTree အားဖြင့်ဟီလ်တန်™, သံရုံး Suites အားဖြင့်ဟီလ်တန်™ဟီလ်တန်ဥယျာဉ်အင်း™, Hampton အင်းအားဖြင့်ဟီလ်တန်™, နည်း, Tru အားဖြင့်ဟီလ်တန်™, ရောင်စုံငွေကောက်ခံ™, Home2 Suites အားဖြင့်ဟီလ်တန်™နှင့်ဟီလ်တန်က Grand အားလပ်ရက်™ဖြင့်ပြုလုပ်နိုင်ပါတယ်။
ကျနော်တို့ app ထဲမှာတချို့ permission များတောင်းပါလိမ့်မယ်။ ဤတွင်အဘယ်ကြောင့်ဖွင့်:
ဒစ်ဂျစ်တယ် Key ကိုထောက်ခံဘယ်မှာသင်၏တံခါးတို့ကိုသော့ဖွင့်ဖို့ဘလူးတုသ်ကိုအသုံးပြုသည်။
အချို့အင်္ဂါရပ်ကိုသင်ဒစ်ဂျစ်တယ် Key ကိုအတူတံခါးကိုအနီးနေသည့်အခါကိုသိရန်, အနီးအနားရှိဟိုတယ်များကိုရှာဖွေသင့်တည်နေရာကိုသုံးပါ, သင်တိကျပြမြေပုံများကိုပြသပါသည်။
•ကိရိယာ ID & ခေါ်ဆိုမှုသတင်းအချက်အလက်
ကျနော်တို့ device ကိုမော်ဒယ်များကိုဖြတ်ပြီး app ကိုဖွင့်စွမ်းဆောင်ရည်ကိုစောင့်ကြည့်ရန်ဤသုံးပါ။ ကျနော်တို့ကသူတို့နှင့်အတူမဆိုပုဂ္ဂိုလ်ရေးဆိုင်ရာသတင်းအချက်အလက်များကိုစုဆောင်းကြပါဘူး။
Hilton Honors အတြက္ အသံုးျပဳသူ အဆင့္သတ္မွတ္ခ်က္မ်ား
Hilton Honors အေပၚ ျပန္လည္စစ္ေဆးမႈမ်ား
Hilton Honors အေပၚတြင္ ျပန္လည္ စစ္ေဆးမႈ မရွိပါ။ ပထမဆံုး ျပဳလုပ္လိုက္ပါ!
Hilton Honors အား အခ်က္ျပပါ
michael-belisle စတိုး 2.94k 863.82k
Hilton Honors ႏွင့္ အလားတူေသာ အက္ပ္မ်ားကို ေဒါင္းလုဒ္ဆြဲပါ
APK အေၾကာင္း Hilton Honors အခ်က္အလက္
APK ဗားရွင္း 3.9.0
ထုတ်လုပ်သူ Hilton Worldwide
ကိုယ်ရေးလုံခြုံမှု မူဝါဒ https://secure3.hilton.com/en/promotions/privacy-policy/english.html
လက်မှတ် SHA1: B2:64:61:AF:75:8F:35:73:87:E5:38:7A:17:51:80:1A:87:5F:94:B2
ထုတ်လုပ်သူ (CN): Jeremy Kooistra
အဖွဲ့အစည်း (O): Hilton Worldwide
နယ်မြေ (L): McLean
ပြည်နယ်/မြို့တော် (ST): VA
Hilton Honors APK ကိုေဒါင္းလုဒ္ဆြဲပါ